Igama lesayensi: Ocimum basilicum
Igama elivamile: Basil noma Sweet Basil
Isitshalo se-basil kucatshangwa ukuthi sivela eNdiya. Namuhla itshalwe emhlabeni wonke ngamaqabunga ayo amasha futhi omisiwe kanye namafutha ayo abalulekile.
Isihlahla se-basil sakhula sibe ngu-700 mm ubude futhi sinomuthi we-herbaceous okhuni futhi uba namandla njengoba lesi sitshalo sikhula. Amaqabunga aluhlaza okwesibhakabhaka ohlaza aluzungeza phansi bese ekhonjiswa kancane. Amaqabunga afinyelela cishe ama-80 mm ubude futhi angaba ngu-30 kuya ku-50 mm ububanzi. Ezinye izinhlobo zinamahlamvu abomvu amancane. Uma lesi sitshalo sivunyelwe ukuba sikhule kuze kufike ekuvuthweni okumhlophe kuya kwezimbali zombala we-lilac sizovela bese siya enzalweni.
I-Basil ihlwanyelwe amaqabunga ayo aphunga ayasetshenziswa omusha noma omisiwe kanye nokukhiqizwa kwamafutha abalulekile kanye nesisekelo. Amaqabunga amasha futhi omisiwe asetshenziselwa ukupheka njenge-flavouring futhi adliwe ama-salads aluhlaza.
I-Basil yaziwa ngokusebenzisa kwayo imithi: ukukhulula isicashu, ukuhlushwa nokuvuvukala. It isetshenziselwa ukukhulula ukukhathazeka njengoba inesenzo esincane sokudambisa. I-Basil nayo isetshenziselwe imithi ye-migraines futhi yathi ukusiza abagulayo bokufa kwesithuthwane.
I-Basil yenza kahle kakhulu enhlabathini enomhlabathi ocebile kahle owenziwe kahle ophezulu. Kungakhula emhlabathini ngenani elibanzi ku-pH ka-4.5 kuya kweyisishiyagalombili kepha kungcono emhlabathini nge-pH ka-6.5.
Lapho ulungiselela inhlabathi endaweni yokutshala kubalulekile ukufaka umquba owanele noma umquba emhlabathini. Lokhu kumele kulinywa ngenyanga ngaphambi kokutshala ukuze unikeze naluphi ukhula ithuba lokuhluma. Umhlabathi kumele uchithe isikhathi eside ngesonto ngaphambi kokutshala ukuhlanza ukhula futhi ubusheleleze indawo yezitshalo.
I-Basil ikhula kahle ezindaweni ezifudumele emazingeni okushisa ephakathi kuka-12°C no-28°C. Kudinga ukushisa okuhluma kuka 20°C. Isitshalo se-basil sizwela ku-frost. Ukushisa okwedlulele noma ukushisa kubanda isitshalo se-basil namaqabunga ayo azwela kakhulu.
Ukukhiqizwa kwezebhizinisi, amanye ama-cultivars athandwayo yi-Anise, i-Camphor, i-Cinnamon, i-Dani, i-Dark Opal, i-Genovese, iqabunga elikhulu, i-lemon, ama-mammoth, ama-ruffles ama-Purple ne-Sweet.
Kungcono ukufuna izeluleko zendawo mayelana nemikhuba ekhulayo nenkampani yezinhlanzi ukuthi yiziphi izinhlobo ezihlukahlukene kakhulu ezimakethe ezihlosiwe.
Ungatshali lutho ngaphandle kokuba imakethe yayo iyaziwa okokuqala.